Maqaayadda Flooded Cafe – Fadlan haku istaagin Kalluunka | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Maqaayadda Flooded Cafe – Fadlan haku istaagin Kalluunka
Posted by: Mahad Mohamed July 12, 2020
Himilo – Maqaayadaha xayawaannada oo marka aad tagto aad kula kulmi karto nuucyada kala duwan ee noolaha sida bisadaha, idaha, eeyaha iyo bakaylaha waxay noqdeen kuwo ku baahaya aduunweynaha oo dhan.
Hayeeshe, maqaayadda Amix Coffee waa midda kaliya oo aad adeegeeda ku raaxaysan karto – iyada oo lugahaada hoostiisa ay ku dabaalanayaan malaay ama kalluun yaryar oo midabo kala duwan leh.
Waxay ku taalla magaalada Ho Chi Minh City ee dalka Fiitnaam, waxaana ay leedahay hool fidsan oo isla eg kaas oo biyo meel dhexaad oo lagu daadiyay kalluun yaryar la dhex dhigay kuraasyo yaryar iyo miisas loogu tala-galay inay fariistaan macmiisha.
Si qofku usoo galo maqaayadda, waxaa laga rabaa inuu lasoo galo kabo la’aan marka koobaad oo uu nadiif kasoo dhigo. Waxay intaas kaddib ku raaxaysan karaan caga la’aan ay biyuhu hadba dhinaca uga keenayaan kalluun yaryar.
Digtoonida iyo in aad looga taxadiro halka ay tahay inaad cagaha dhigto waa mid iyadna aad loogu baahan yahay.
Fikradda maqaayadda waxaa iska leh da’yar 23-jir ah oo lagu magacaabo Nguyen Duoc Hoa taas oo rabtay inay geesta kale ka istaagto maqaayadaha xayawaannada ku caan ka ah. Hayeeshe, in aragtideeda loo beddelo mid ficil ah ma ahayn waxa ugu fudud ee dunida laga sameeyo.
Balse muddo dheer iyo juhdi badan oo ay ku bixisay inay meel mariso, ugu danbeyn way ku guuleysatay. Qeyb kamid ah caqabadihii heystay waxaa kamid ahaa fatahaad mararka qaar dhacda iyo nadaafadda goobta oo had iyo jeer ay qasab tahay in sagxadda dhulku ay caddaan muuqda noqoto. Isticmaalka biyo gaaraya 10,000 oo litir ayaana sidoo kale aheyd arrin xal u heliddeeda markii hore lagu wareeray balse ugu danbeyn la suura-geliyay.
Hoa waxay u sheegtay EFE in qoyska iyo carruurtooda ay yihiin macmiisha ugu badan ee soo booqda. Balse aalaaba maadaama carruur ay ka daba ordaan kalluunka qaar, waxay kahor imaaneysaa sharciga iyo qaanuunka u degsan maqaayadda.
Halka aragtiyo fiican laga bixiyay hal-abuurka maqaayaddan, qaar kale ayaa kala dul dhacay canbaareyn. Dadka qaar ayaa qaba in qaabkan loola dhaqmayo kalluunka ay halis ku leedahay badqabkiisa taas oo ah danbi laga galayo xuquuqda noolaha.
“Kahor taga falkan waayo waa mid ka dhan ah xuquuqda noolaha,” ayuu ku taliyay mid kamid ah dadkii saluugsanaa fikradda maqaayadda.
Previous: Barcelona oo £18m ka helaysa iibinta Ousmane Dembele
Next: Hector Bellerin oo ka tagaya Arsenal